တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ အိန်ဒိယကွညျးတပျဦးစီးခြုပျ General MM Naravane အား လကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ အိန်ဒိယ ကွညျးတပျဦးစီးခြုပျ General MM Naravane, PVSM, AVSM, SM, VSM, ADC အား ယနေ့ နလေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့အတူ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားနှငျ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဗိုလျခြုပျ ဖုနျးမွတျတို့ တကျရောကျကွပွီး အိန်ဒိယကွညျးတပျဦးစီးခြုပျ General MM Naravane နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mr. Saurabh Kumar ၊ အိန်ဒိယစဈသံမှူး Colonel Ketan Arun Mohite နှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့အိန်ဒိယနိုငျငံတို့သညျ မိတျဆှရေငျး၊ မိတျဆှကေောငျးနိုငျငံမြားဖွဈပွီး ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု ပိုမိုတိုးမွငျ့ခိုငျမာရေးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈပေါငျးမြားစှာကတညျးကပငျ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ကောငျးမှနျသညျ့ ဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားရှိခဲ့ပွီး နယျစပျဒသေတညျငွိမျ အေးခမျြးရေး၊ ကာကှယျရေး၊ လကေ့ငျြ့ရေးနှငျ့ အခွားကဏ်ဍပေါငျးစုံတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ဆကျလကျတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ အနဖွေငျ့ ငွိမျးခမျြးစှာ အတူယှဉျတှဲနထေိုငျရေးမူကွီး ၅ ရပျ၊ လှတျလပျ၍တကျကွှပွီး ဘကျမလိုကျသော နိုငျငံခွားရေးမူဝါဒမြားနှငျ့အညီဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး အာဆီယံမူဝါဒအတိုငျး ဆောငျရှကျလကျြ ရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာ့တပျမတျောကို ခတျေမီတပျမတျောအဖွဈ တညျဆောကျလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ နိုငျငံတိုငျးရှိ တပျမတျောတိုငျးသညျ တိုငျးပွညျနှငျ့ပွညျသူ၏ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျကို ကာကှယျရနျအတှကျဖွဈပွီး လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခဖွဈပှားနမှေုကို မညျသညျ့တပျမတျောကမှ မလိုလားသညျဖွဈ၍ ပဋိပက်ခမြားကို ငွိမျးခမျြးသော နညျးဖွငျ့သာ ဖွရှေငျးဆောငျရှကျရနျ လိုအပျသညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနှငျ့နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားကို အပွနျအလှနျယုံကွညျမှုဖွငျ့ ဆကျလကျတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျသှားမညျ့အခွအေနမြေားနှငျ့ နယျစပျဒသေလမျးပနျး ဆကျသှယျမှုကောငျးမှနျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားအား ခငျမငျရငျးနှီးစှာ အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အိန်ဒိယကွညျးတပျဦးစီးခြုပျတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General MM Naravane အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ – ၅
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အိန္ဒိယ ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General MM Naravane, PVSM, AVSM, SM, VSM, ADC အား ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ဖုန်းမြတ်တို့တက်ရောက်ကြပြီး အိန္ဒိယကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General MM Naravane နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Saurabh Kumar ၊ အိန္ဒိယစစ်သံမှူး Colonel Ketan Arun Mohite နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သည် မိတ်ဆွေရင်း၊ မိတ်ဆွေ ကောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုတိုးမြင့်ခိုင်မာရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပင် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ကောင်းမွန် သည့် ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိခဲ့ပြီး နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် အခြားကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး ၅ ရပ်၊ လွတ်လပ်၍တက်ကြွပြီး ဘက်မလိုက်သော နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒများနှင့်အညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အာဆီယံမူဝါဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ခေတ်မီတပ်မတော်အဖြစ် တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတိုင်းရှိ တပ်မတော်တိုင်းသည် တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေမှုကို မည်သည့်တပ်မတော်ကမှ မလိုလားသည်ဖြစ်၍ ပဋိပက္ခများကို ငြိမ်းချမ်းသော နည်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့်နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုဖြင့် ဆက်လက်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည့်အခြေအနေများနှင့် နယ်စပ်ဒေသလမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အိန္ဒိယကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ်တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။